I-China JXO ingcindezi ijika i-adsorption yokuhlukaniswa komoya imishini yokukhiqiza umoya-mpilo Ukukhiqiza kanye Nemboni |UJuxian
I-JXO pressure swing adsorption air separation imishini yokukhiqiza umoya-mpilo
I-JXO pressure swing adsorption imishini yokukhiqiza umoya-mpilo isebenzisa isisefo semolekyuli ye-zeolite yekhwalithi ephezulu njenge-adsorbent, isebenzisa isimiso se-press swing adsorption, ngokuqondile emoyeni ocindezelwe ukuthola umoya-mpilo.
◆ Ngemva kokungena embhoshongweni we-adsorption nge-zeolite i-molecular sieve, i-nitrogen, i-carbon dioxide, umhwamuko wamanzi emoyeni imuncwa ngesihlungo samangqamuzana nomoya-mpilo ngenxa yezinga elikhulu lokusabalalisa nge-adsorbent ukuze kuzuzwe ukuhlukana.
◆ Lapho i-nitrogen nokunye ukungcola okukhangiswa embhoshongweni we-adsorption kufinyelela izinga elithile, nciphisa ingcindezi yokwenza i-zeolite molecular sieve desorption, ukuze ukuvuselelwa kwe-adsorbent, kungasetshenziswa kabusha.
1. Yamukela inqubo entsha yokukhiqiza umoya-mpilo, hlala ulungiselela idizayini yedivayisi, wehlise ukusetshenziswa kwamandla kanye nemali yokutshala imali.
2. umshini ohlakaniphile oxhumanisayo wokuthulula umoya-mpilo ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemikhiqizo ye-oxygen.
3. idivayisi eyingqayizivele yokuvikela isihlungo se-molecular, andise impilo yesevisi ye-zeolite molecular sieve.
4. inqubo ephelele design, elilungile ukusetshenziswa umphumela.
5. Ukugeleza komoyampilo ozikhethela, uhlelo lokulawula okuzenzakalelayo lokuhlanzeka, uhlelo lokuqapha okukude, njll.
6. ukuhlinzwa okulula, ukusebenza okuzinzile, izinga eliphezulu lokuzenzekelayo, kungabona ukusebenza okungenamuntu.
Ukugcinwa kokuthengisa emva kokuthengisa
1, i-shift ngayinye ihlola njalo ukuthi i-exhaust muffler ithululwa ngokujwayelekile.
Isithulisi se-exhaust esifana nokukhishwa kwempushana emnyama sibonisa ukuthi i-carbon molecular sieve powder, kufanele ivalwe ngokushesha.
3, hlanza uthuli nokungcola ebusweni bezinto zokusebenza.
4. Hlola umfutho we-inlet, izinga lokushisa, indawo yamazolo, izinga lokugeleza kanye nokuqukethwe kwamafutha omoya ocindezelwe njaloOkuvamile.
5. Hlola ukwehla komfutho womthombo womoya oxhuma izingxenye zendlela yokulawula umoya.
Ukukhiqizwa komoyampilo 3-400 nm3/h
Ukuhlanzeka komoyampilo 90-93% (okujwayelekile)
Umfutho we-oxygen 0.1-0.5mpa (iyalungiseka)
Iphuzu lamazolo ≤-40~-60℃(ngaphansi kwengcindezi yomoya)
Okwedlule: Umshini wokukhiqiza i-nitrogen we-pressure swing